गर्भवस्थामा किन लाग्छ वाकवाकी ? यस्तो छ घरेलु उपचार ! – Krazy NepaL
गर्भवस्थामा किन लाग्छ वाकवाकी ? यस्तो छ घरेलु उपचार !
March 10, 2021 3301
ग’र्भावस्थामा महिलाहरुलाई वा’कवाकी लाग्ने गर्दछ । यो हरेकजसो महिलाहरुमा देखिने गर्छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने धेरैलाइ थाहा नहुनसक्छ । ग’र्भावस्थामा महिलामा आउने एचसिजी ह’र्मोनका कारण वा’कवाकी र रिं’गटा लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।अध्ययन अनुसार, ग’र्भावस्थामा आउने यस्तो हर्मोनले निषेचित अन्डालाई पाठेघरको भित्तामा आएर बस्न सघाउँदछ । यसबाहेक स्ट्रे’स र थ’कानका कारण पनि यस्तो हुन सक्दछ ।
यस्तो सम’स्याले आमालाई असहज हुन्छ तर पेटमा भएको बच्चालाई भने कुनै असर हुदैँन गर्भवती अवस्थामा वान्ता र वा’कवाकी लाग्ने अर्को कारण भने इस्ट्रोजिन ह’र्मोन हो । यस्तो हर्मोन ग’र्भवती महिलामा बढेर जान्छ । ७० प्रतिशत ग’र्भवती महिलालाई यस्तो लक्षण देखिने गरेको पाइन्छ ।चिकित्सकहरुका अनुसार, वा’कवाकी लाग्न ग’र्भवती भएको ४ देखि ८ हप्ताबाट शुरु हुन्छ । र, यो क्रम १३ देखि १४ हप्तासम्म नै रहन्छ । कसैकसैलाई भने यो भन्दा बढी समय सम्म हुनसक्छ । यस्तो सम’स्याले आमालाई असहज हुन्छ तर पेटमा भएको बच्चालाई भने कुनै असर नहुने चिकित्सक बताउँछन् ।
– बढी नै समस्या भएमा घरेलु उपचार विधि अपनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि वाकवाकी लाग्ने वा बढाउने खानेकुरा खानुहुँदैन । त्यस्ता खानाको गन्धबाट पनि टाढै रहँदा राम्रो हुन्छ ।
– बिहान उठ्नुअघि भिजाएर राखेको गेडागुडी खानुपर्छ । जसलाई भेज लाइक टोस्ट पनि भनिन्छ । र, त्यो खाएको केही समयपछि मात्र उठ्ने गर्नुपर्छ ।
– एकैपटक थुप्रै खाने बानीलाई सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ । बरु थोरै–थोरै छोटो–छोटो समयको ग्यापमा खाँदा यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सहयोग हुन्छ ।
– नेपालीको खानासँगै पानी खाने संस्कार छ । तर, खानासँग धेरै पानी नखाँदा पनि यस्तो समस्याबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
– यसै पनि ग’र्भवती आमाले आफ्नो स्वास्थ्य र भोजनमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । त्यस्तै, वाकवाकी र रिंगटा लाग्ने समस्या बढी भएमा प्रशस्त आराम गर्न आवश्यक हुन्छ ।
– गर्भवती आमा बस्ने कोठा तथा घरको वातावरण खुला र राम्रोसँग हावा खेल्ने हुनुपर्छ ।
– यसलाई कम गर्न अदुवा राखेर कागतीपानी पनि खान सकिन्छ ।
– अधिक मात्रामा आइरनयुक्त खानाको प्रयोगले पनि यस्तो सम’स्यालाई धेरै घटाउन सकिन्छ । यसका लागि औ’षधि र चक्की पनि खान सकिन्छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्र ।
– कतिपय ग’र्भवती आमालाई वा’कवाकी हुने समस्या अत्यधिक हुन्छ । यसरी हुने बा’न्ताबाट शरीरलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तत्वहरूसमेत बाहिरिन सक्छ । त्यसैले यस्तो समस्या बढेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था पुग्न आवश्यक हुन्छ ।
– कहिलेकाहीँ मोलार प्रे’ग्नेन्सीका कारण पनि वाकवाकी लाग्ने, बा’न्ता हुने सम’स्या हुन्छ । मोलार प्रेग्नेन्सीले ग’र्भवती भएजस्तै लक्षण देखाउँछ, तर पेटमा बच्चा भने हुँदैन । त्यसैले यसबारे पनि सजग हुन आवश्यक हुन्छ ।
Prevछिटो-छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस्
Nextमहिनावारीमा पेट दुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
फेरी अर्को बाहि*रियो जं’गल का’ण्ड यू’ट्यूब मा भा’इरल ! (भिडियो सहित
रेष्टुरेन्ट र डान्सबार बन्द गर्न निर्देशन, लकडाउन कार्यतालिका यस्तो छ
आज ११ जेठ २०७८ मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ